Wararka - Tilmaan dhammaystiran oo ka mid ah Dhammaan Daqsatada ugu Fiican ee La Iibsado 2021.
Mashiinka wax lagu shiido
CNC Qaybo Machined
CNC Qaybo Machining
CNC Qaybo axdi qarameedka
Qaybaha Ku -Tallinta Birta
Baaritaan La Diray
Tilmaam dhammaystiran oo ka mid ah Dhammaan Daroogada ugu wanaagsan ee Weeds -ka lagu iibsado 2021.
Waxba ma aha haddii aad ruxdo, laabto laabatooyinka ama aad qaadato dillaac marka ay timaaddo xashiishka sigaarka, mar walba waxaa jira wax ay tahay inaad haysato: Furimaha habboon. Halkaan waxaa ah xulashadayada mashiinnada ugu fiican ee hadda suuqa yaal.
Waxba ma aha haddii aad tahay qof ku cusub xashiishadda ama xamaasad khibrad leh marka ay timaaddo haramaha, waxaa jira wax muhiim u ah kalfadhiga guuleysta: geedo si fiican loo beeray. Iyadoo aan loo eegin haddii aad tahay qof sigaar cabba ama isticmaala vape, waxa kaliya ee ay tahay inaad mar walba ku haysato waa mashiinkaaga. Sababtu waa mid fudud; waxaad u baahan tahay ganaax, caws la jarjaray oo si habsami leh u guban kara. Waayo? Sababtoo ah aagag badan ayaa ka dhigan meel sare oo ka fiican.
Dadka qaar waxay isticmaalaan maqas, farahaaguna sidoo kale way samayn karaan khiyaamada, laakiin ma jiro hab isbarbar dhigaya Furimaha hore ee lagu kalsoonaan karo. Waxay ku yimaadaan qaabab iyo qiyaaso oo dhan, waxaad ka heli kartaa wax kasta oo aad malayn karto, iyo hal -abuurnimadii ugu dambeysay, waxaad ka heli doontaa qaar aad u cajiib ah xagga naqshadeynta iyo shaqeynta. Hal -abuurka iyo tiknoolajiyadda ayaa si joogto ah u hagaajinaya hannaanka shiididda, oo haddii shiidi dhacdo, sigaar -cabiddu sidoo kale way kobcaysaa.
Fiiri xulashadan mashiinka wax lagu shiido ee ugu fiican suuqa hadda oo arag waxa ka dhigaya Furimaha Furimaha mid ka soocaya inta kale.
Waa maxay sababta loo isticmaalo Furimaha Weedha?
Adiga oo isticmaalaya ilkaha fiiqan iyo xoog yar oo gacanta ah, ama riix badhanka haddii aad la shaqaynayso mid ka mid ah noocyada korontada ee xiisaha leh, mashiinka weedha ayaa dooggaaga kala goynaya si aadan u dhaafin cidiyahaaga maqasyo labo ah oo aad guriga ku haysato. Natiijo ahaan, waxaad helaysaa ubax dhulka qiiqa oo aad u qiiqaya dhidid la'aan.
Markaad ku shaqaynayso bilaa Furimaha, ma heli kartid geedahaaga sida ugu fiican ee suurtogalka ah si aad u hesho gubasho aad u fiican, gaar ahaan haddii ay tahay dheg-dheg. Ma aha in la xuso, ma heli kartid kief, trichomes -ka dib -u -dhalaalaya ee ka soo burqanaya geedkaaga oo dhan oo awood badan. Ma fududa, ugu yaraan.
Waxaad ku qaadan kartaa daqiiqado goynta, ama ka sii daran, soo qaadista buro. Ama, waxaad isticmaali kartaa mashiinka wax lagu shiido oo aad jebiso kaydkaaga ilbidhiqsiyo waxaadna heli kartaa kief, kaas oo aad ku rushayn karto ubaxaaga si aad u wanaajiso. Ka hadal dhagaxa dhagaxa ah.
Griinleyda ayaa sidoo kale hubisa xitaa gubasho. Haddii aad baaquli ku duubto bud cawl leh, markaa ma buuxsami kartid baakad baaquli, oo asal ahaan waad khasaarinaysaa maxaa yeelay si fiican uma kululayn karto. Waxaa intaa dheer, way adag tahay in la kiciyo, oo inta badan, weli waxaa jira xoogaa cagaar ah, oo aadan ogaan doonin ilaa aad tagto daadinta “dambaska”.
Sigaar -wadayaasha iyo sigaar -cabbayaasha ayaa sidoo kale ka faa'iideysan doona Furimaha haramaha. Dhirta soo martay ganaax (laakiin aan aad u fiicnayn) shiid ayaa si siman loogu kala saari karaa waraaqaha waxayna ka dhigaysaa hannaanka duudduuban mid dabayl leh. Waxayna si fiican u cabbaan sigaarka.
Noocyada Daqayaasha Daqa
Waxaa jira laba nooc oo waaweyn oo mashiinnada cawska lagu shiido: mashiinnada wax lagu riixo iyo mashiinnada korontada. Makiinadaha wax lagu shiido, dadaal yar ayaa loo baahan yahay. Waa inaad leexataa oo leexataa adigoo isticmaalaya gacmahaaga si aad shaqada u qabato.
Marka la eego qiimaha mishiinka wax lagu shiido, qiimuhu wuu kala duwan yahay laakiin badidood waxaa loo tixgeliyaa inay awoodi karaan bulshada haramaha. Dhammaan waxay kuxirantahay nooca, maaddaama ay jiraan noocyo badan oo mashiinnada wax lagu riixo:
2-Mashiinka Weed Goyn: hal qol oo shiididda iyo kaydinta.
3-Mashiinka Weed-ka: laba qaybood, mid wax lagu shiido iyo mid lagu kaydiyo.
4-Mashiinka Weed Goynta: saddex qaybood, mid wax lagu shiido, mid lagu kaydiyo, midna kief lagu dhammeeyo shaashad.
In kasta oo aysan caan ahayn, haddana waxaa jira 5-xabbadood oo wax lagu shiido. Noocan sida caadiga ah wuxuu leeyahay afar qaybood: shiidi, kaydin, iyo laba kief. Lahaanshaha laba qabsade kief waxay kaa caawin kartaa inaad soo qabato budada ubaxa oo awood badan maadaama ay leedahay shaashad dheeri ah oo lagu dabin karo walxaha dhirta ee xad -dhaafka ah.
Furimaha kaarku waa nooc kale oo Booqday Furimaha Gacanta oo aan lahayn wax qaybo ah waana caato oo la qaadi karo. Booqashooyinka kaararka ma shiidi doonaan sidoo kale kuwa wax lagu shiido, sidoo kale ma qabsan doonaan kief, laakiin waa raqiis waxayna u sameeyaan si sahlan marka la socdo.
Marka laga reebo in lagu sameeyay tiro kala duwan oo qaybo ah, mashiinnada haramaha waxaa laga sameeyaa agabyo kala duwan, mid walbana waxay leedahay faa'ido iyo qasaarooyinkeeda:
Caag: raqiis, khafiif ah, wuxuu bixiyaa xajin OK, ma raagto waqti dheer, waxayna u badan tahay inuu jabo.
Qoryo: mid gaar ah, dabiici ah, ayaa laga yaabaa inay soo saarto bir -xiirashada inta la isticmaalayo waxayna qaadataa dadaal dheeri ah si loo shiido.
Aluminium: ugu raqiisan biraha, wuxuu ka dheer yahay balaastigga, wuxuu ka miisaan badan yahay balaastigga, fududahay in la isticmaalo, wuxuuna bixiyaa shiidid wanaagsan.
Titanium: tayada ugu sareysa, ma aha mid culeyskiisu yahay aluminium, ugu qaalisan, oo la dhisay si uu ugu dambeeyo, oo saaxiibtinimo leh.
Ugu dambayntii, waxaad haysataa mashiinnada korontada. Boorsooyinka korontada ayaa shaqooyinka oo dhan kuu qabta, qaarkoodna xitaa waxay kaa bixin doonaan haramahaaga, taas oo ka dhigaysa mid ku habboon in la rogrogo. Waxay u muuqdaan inay yihiin dhinac ka qiimo badan oo ma ilaalin doonaan kief, laakiin haddii aad tahay qof qaba arthritis -ka ama gacmaha ka xanuunsan yihiin, mishiinnada korontada ayaa culeyska ka qaada habka shiididda.
Noocyada Cajiin -cawska Ugu Fiican
Haddii aad u malaysay in xulashada galaaska iyo uumi -bixiyeyaashu ay aad u ballaadhan yihiin, markaa waligaa iskuma dayin inaad wax ka iibsato mashiinka weedha ugu fiican. Waxaa jira kumanyaal la heli karo, meel walbana waa joogaan, min madaxyada ilaa Amazon. Waxaad sidoo kale la kulmaysaa khataro marka aad wax ka iibsanayso Booqday Furimaha Furimaha Dagaalka maxaa yeelay ma ogid inay shaqaynayaan ilaa aad ka iibsato. Waxaa jira waxyaabo yar oo ka xun in lacag lagu lumiyo aalad qabata shaqo daciif ah.
Doorashada astaanta saxda ah waa wax walba marka aad raadineyso weelka ugu fiican cawska. Haddii summaddu leedahay sumcad xun, markaa waxaad filan kartaa inaad hesho alaab xun oo aan waxtar lahayn. Markaad raadineysid noocyada ugu wanaagsan ee wax lagu shiido cawska, hubso inaad ballaariso kuwa leh dib u eegista xiddigaha iyo marqaatiyada.
Tilmaamaha Dhameystiran ee Geedaha Ugu Fiican ...
Waxba ma aha haddii aad ruxdo, laabto laabatooyinka ama aad qaadato dillaac marka ay timaaddo xashiishka sigaarka, mar walba waxaa jira wax ay tahay inaad haysato: Furimaha habboon. Halkaan waxaa ah xulashadayada mashiinnada ugu fiican ee hadda suuqa yaal. Waxba ma ahan haddii aad tahay qof ku cusub xashiishadda ama xamaasad leh marka ay timaaddo ...
2/F, No.46, Dapu Rd, Huaide, Humen Town, Dongguan, Guangdong Provice 523926, Shiinaha.